Football Khabar » कोपा अमेरिका : ब्राजिल र अर्जेन्टिना सेमिफाइनलमै भिड्ने !
कोपा अमेरिका : ब्राजिल र अर्जेन्टिना सेमिफाइनलमै भिड्ने !
ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगितामा यसपटक आयोजक ब्राजिल, उरुग्वे र अर्जेन्टिनालाई प्रमुख उपाधि दाबेदार मानिएको छ । यी तीनवटै टोली क्वार्टरफाइनल प्रवेश गरिसकेका छन् । अब दुई दिनपछिबाट क्वार्टरका खेल सुरु हुँदैछन् ।
क्वार्टरफाइनलमा ब्राजिलविरुद्ध पराग्वे, चिलीविरुद्ध कोलम्बिया, अर्जेन्टिनाविरुद्ध भेनेज्वेला र उरुग्वेविरुद्ध पेरु खेल्नेछन् ।
यो टाईअनुसार प्रमुख दुई उपाधि दाबेदार ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको भेट सेमिफाइनलमै हुनेछ । प्रतियोगितामा स्टार खेलाडीले भरिएका दुई टिम फाइनलअगागै एक अर्काविरुद्ध भिड्ने भएका हुन् ।
अब क्वार्टरफाइनलमा यदि अर्जेन्टिनाले भेनेज्वेलालाई हरायो र अर्को खेलमा ब्राजिलले पराग्वेलाई हरायो भने सेमिफाइनलमा ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको भेट हुनेछ ।
अर्को सेमिफाइनल खेलमा कोलिम्बया भर्सेस चिली र उरुग्वे भर्सेस पेरुबीचको खेलको विजेता भिड्नेछन् ।
तसर्थ अब क्वार्टरका खेल हुँदा धेरैको ध्यान ब्राजिल भर्सेस र पराग्वे र भेनेज्वेला भर्सेस अर्जेन्टिनाको खेलमाथि हुनेछ । यी खेलमा ब्राजिल र अर्जेन्टिनालाई अर्को चरण जाने दाबेदार मानिएको छ ।
जारी प्रतियोगितामा ब्राजिल उकृष्ट लयमा देखिएको छ भने अर्जेन्टिना सामान्य प्रदर्शन गरिरहेको छ । ब्राजिल समूह चरणबाट समूह विजेता बनेर क्वार्टर पुग्दा अर्जेन्टिना उपविजेता बनेर क्वार्टरफाइनल प्रवेश गरेको थियो ।
क्वार्टरफाइनलका खेल नेपाली समयअनुसार शुक्रबार बिहानबाट हुनेछन् । क्वार्टरफाइनलमा हुने चार खेलबाट सेमिफाइनल पुग्ने चार टिमको टुंगो लाग्नेछ ।
नेपाली समयअनुसार खेल तालिका :
ब्राजिल भर्सेस पराग्वे – शुक्रबार बिहान, ६ः१५ बजे
भेनेज्वेला भर्सेस अर्जेन्टिना – शनिबार बिहान, १२ः४५ बजे
कोलम्बिया भर्सेस चिली – शनिबार बिहान, ४ः४५ बजे
उरुग्वे भर्सेस पेरु – आइतबार बिहान, १२ः४५ बजे
प्रकाशित मिति ११ असार २०७६, बुधबार ०४:२४